Filtrer les éléments par date : vendredi, 27 novembre 2020
vendredi, 27 novembre 2020 20:45
« Centre National d’Enseignement de la Langue Anglaise (CNELA) »
Fianarana teny anglisy : Voatendry ho Tale misahana ny « Centre National d’Enseignement de la Langue Anglaise (CNELA) » Rakotoniera Zoly Harilala Avotiana
vendredi, 27 novembre 2020 20:44
CNRIT : Randrianirainy Huchard Paul Berthin no Tale vaovao
Voatendry ho Tale misahana ny « Centre National de Recherches Industrielle et Technologique (CNRIT) » nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 25 novambra 2020 Randrianirainy Huchard Paul Berthin.
vendredi, 27 novembre 2020 20:42
Valanjavaboary Tsimbazaza : Randrianirina Jasmin Emile no Tale vaovao
Voatendry ho Tale misahana ny « Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) » nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 25 novambra 2020 Randrianirina Jasmin Emile.
vendredi, 27 novembre 2020 20:40
IST Antananarivo : Rakotondrajaona Holy Nirina Jean Luc no Tale Jeneraly
Voatendry ho Tale Jeneralin’ny « Institut Supérieur de Technologie » eto Antananarivo nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 25 novambra 2020 Rakotondrajaona Holy Nirina Jean Luc.
vendredi, 27 novembre 2020 20:33
ONE : Rakotoson Rija Herisolo no Tale Jeneraly
Voatendry ho Tale Jeneralin’ny « Office National de l’Environnement (ONE) » nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 25 novambra 2020 Rakotoson Rija Herisolo.
vendredi, 27 novembre 2020 20:03
Etazonia : Niarahaba an’i Joe Biden amin’ny nahavoafidy azy ho filoha i Xi Jinping fa hifanaja
Nandefa taratasy fiarahabana an’i Joe Biden, ny 25 novambra 2020, amin’ny nahavoafidy azy ho filohan’i Etazonia ny filohan’i Chine, Xi Jinping.
Tokony halavirina ny ady na koa fifanandrinana hoy i Xi Jinping tamin’ny taratasiny, fa hifanaja anatin’ny fiaraha-miasa mba samy hahazo tombontsoa hahafahana mahita fandriampahalemana sy fampandrosoana.
vendredi, 27 novembre 2020 19:56
Tanandava – Beroroha : Lavon’ny zandary i Damison, dahalo raindahiny
Maty tao anatin’ny fifampitifirana tamin’ny Zandary avy amin’ny CSAO Beroroha, ny marainan’ny 21 novambra 2020 tao Ankilisivy Fokontany Bekifio, Kaominina Tanandava, Distrika Beroroha, i Damison, dahalo raindahiny voarohirohy amin’ny halatr’omby, fanafihana mitam-basy, fandrahonana ho faty.
Omby miisa enina, basimborona iray, fanamiana mpitandro filaminana sy ody gasy maromaro hita niaraka taminy.
Mitohy ny fikarohana ireo dahalo namany.
vendredi, 27 novembre 2020 19:48
Tetikasa Power Africa : Mitondra herinaratra ho an’ny tokantrano sy orinasa any ambanivohitra miisa 5 200
Nanolotra famatsiam-bola mitentina 1,2 tapitrisa dolara ho an’ny orinasa telo eto Madagasikara ny governemanta amerikana, amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) sy ny tetikasa Power Africa, hampandrosoana ny tambajotra madinika, izay hamokatra herinaratra ho an’ny tokantrano sy orinasa ambanivohitra maherin’ny 5 200.
5% monja amin'ny mponina any ambanivohitr’i Madagasikara no mahazo herinaratra mivantana, na dia eo aza ireo loharanon'angovo azo havaozina toy ny masoandro, ny rivotra sy ny rano.
Ary satria mety ho sarotra ny fidirana amin'ireo faritra lavi-toerana, dia izay indrindra no nampifantoka ny ezaka’i Power Africa amin'ny fampiasana ny herin’ny masoandro sy ny tambajotra madinika, miaraka amin'ny Ministeran'ny Angovo, ny Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER), ary ny sehatra tsy miankina.
vendredi, 27 novembre 2020 19:42
Satan'ny “Géomètre expert” : Tian’i Naivo Raholdina hovaina
Miteraka resabe ny fahalanian’ny tolo-dalàna 03-2020/PL tao amin’ny Antenimieram-pirenena farany teo, izay manova tanteraka ny votoatin’ny lalàna laharana 2011-005 tamin’ny 01 aogositra 2011 mamaritra ny asan’ny “Géomètre expert” eto Madagasikara.
Io lalàna 03-2020 io izay atao koa hoe : "Lalàna Raholdina" dia lalàna te hanova ny satan'ny géomètre expert. Anisany nijoro manohitra azy io ny SYGEP na syndika ivondronan’ny “Géomètre expert” eto Madagasikara, araka ny fanambarana nivoaka tamin’ny 13 novambra 2020.
Taloha dia ny fanjakana no nisahana ny asa fandrefesan-tany sy ny manodidina izany. Tamin'ny taona 1990 tany anefa dia napetraka ny politika fisintahan’ny Fanjakana amin’ny seha-pamokarana rehetra toy ny fambolena, ny fiompiana, ny fandrefesan-tany sns.
Nisy nalefa nisotro ronono nialoha ny fotoana mihitsy ny mpiasa nanoloana izany.